Tag: mmmmmmmmmmmmm Martech Zone
Anyị ahụla ndị nkwusa ntanetị na-alụ ọgụ n'afọ a. Ọtụtụ n'ime ha mụbara ọdịnaya ha, gbasaa mkpuchi isiokwu ha, zụta ndị na-ege ntị ka ha nwekwuo ọnụ ọgụgụ nlele ha, ma mepee saịtị ha na mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ niile. Onwe m, ekwenyere m na nke ahụ bụ mmejọ. Anyị ezere ịzụrụ ndị na-ege ntị, debe isiokwu anyị, anyị ajụla mgbasa ozi ugboro ugboro site na mgbasa ozi na-abụghị isiokwu. Obi dị m ụtọ, netwọk mgbasa ozi na-aza. A na-eme atụmatụ atụmatụ ijeri $ 160 n'ụwa niile na mgbasa ozi dijitalụ n'afọ a, dị